Nanatanteraka ny diabe fanao isan-taona ho an’ny Tompon’ny Fahagagana i Pero · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2012 3:39 GMT
Isaky ny volana oktobra, ao an-drenivohitr'i Però – Lima – no ahitana loko volomparasy, arahan'ny sarin'ilay Tompon'ny fahagagana izay ankalazaina amin'ny alàlan'ny diabe ny 18, 19 ary 28 oktobra. Mandray anjara amin'izany diabe izany avokoa ny olona rehetra avy amin'ny foko sy saranga samihafa.
Tokony ho tamin'ny taona 1651, nivondrona ny andevo mainty hoditra avy any Angola ary nanangana toerana iray hifandraisan'izy ireo tao Pachacamilla, miala kely an'i Lima. Teo amin'ny rindrina anankiray tamin'izany toerana izany no nanaovan'ny andevo iray tsy fantatra anarana ny sarin'i Kristy voahombo teo amin'ny hazo fijaliana. Notanterahany tamin'ny alalan'ny haben'ny finoany io sary nataony io.
Efatra taona taty aoriana, tamin'ny taona 1655, nisy horohorontany namely an'i Lima sy ny tanàna manakaiky azy atao hoe Callao. Maro ny trano nianjera tamin'izany, ary anisan'ireny ny rindrina tao amin'ny tanànan'ny firahalahiana tao Pachacamilla – afa-tsy ilay rindrina nisy ny sarin'i Kristy voahombo ihany no mbola niloko tsara.
Ireo Sahumadoras nizotra tamin'ny Diabe. Saripikan'ilay mpandray anjaran'i Global Voices Isabel Guerra, nahazoana alalana.
Ny bilaogy Historia y fotos [es] mamerina ny tantaran'ilay sary ary mizara amintsika ny zavatra nitranga rehetra manodidina izany sary izany:
Ny bilaogy Universidad 21 [es] mampilaza ny antsipirian'ny làlana rehetra holalovan'ny diabe ao Lima, miaraka amin'ny sarintany.
Mikambana ao amin'ny Mpianadahin'ny Tompon'ny Fahagagana. Saripikan'ny mpandray anjara ato amin'ny Global Voices Isabel Guerra, nahazoana alalana.
Ilay mpilalao sary mihetsika Jesús Neyra (@Jesusneyra) [es] mametraka fanontaniana:
@Jesusneyra: Señor de los milagros q recorres nuestras calles 🙂 #mesmorado #espiritumorado mi deseo te lo mando ya?
@Jesusneyra: Tompon'ny Fahagagana mamakivaky ny tanànany 🙂 #mesmorado [volana volomparasy] #espiritumorado [fanahy volomparasy] hamboraka ny faniriako aminao ve aho?
Ary Karen Ruiz (‏@karen_rfer) [es] manontany azy:
@karen_rfer: @Jesusneyra misy diabe tahaka izao ve any Etazonia? Aty Buenos Aires misy. Miaraka amin'ny fianakaviako aho isan-taona. Tsy mitovy amin'ny any Pero fa mahafinaritra koa.
Juanpi Pozú Pflucker (@juanpipp) [es] nandefa sary ho an'i Jesús Neyra:
@juanpipp: @Jesusneyra ho anao ry rahalahiko, nalaiko vao haingana iny… ho anao anie ny tsara indrindra sy ny betsaka indrindra! pic.twitter.com/lEpUFMYu
Ny fahitalavitra AmericaNoticias.pe (@NoticiAmerica) [es] mizara sary mihetsika ary mitonona manokana ny filoha Ollanta Humala:
@NoticiaAmerica:[VIDEO] Ollanta Humala nohobian'ny olona nandritra ny diabe ho an'ny Tompon'ny Fahagagana http://goo.gl/rygsN
Viajaporperu Indira (@viajaporperu) [es] naneho ny hagagany:
@viajaporperu: Tsy fantatro fa hay hankalazaina any amin'ny firenena 260 ity diabe ho an'ny Tompon'ny Fahagagana ity!!! http://bit.ly/QJOUbe
Hanamarinana izany indrindra, avy any Santiago any Chili, Marion Duarte (@marionfernanda) [es] nandefa sary sady nanoratra:
@marionfernanda: Diabe ho an'ny Tompon'ny Fahagagana nandalo an'i Paragoay. nico_brown pic.twitter.com/zSsUKk5F
Adrián (@sspxs) [es], avy any Mexico, nandefa sary koa:
@sspxs: Diabe ho an'i Tompon'ny Fahagagana (@ Plaza de la Constitución (Zócalo) miaraka amin'ny 23 hafa) [pic]: http://4sq.com/TJOy5j
Humbero Meneses (@elyuka) [es] manoratra mikasika ilay sary nandalo teo akaikin'ny tranony:
@elyuka: Anio, nandalo teo anoloan'ny varavarako ny Tompon'ny Fahagagana. Azoko lazaina fa tena tsara lavitra mihoatra ny noely izany.